टोपोकेड, टोपो भन्दा बढी, सीएडी भन्दा अधिक - जिओफुमाडास
अगस्त, 2009 ArcGIS-ESRI, जीपीएस / उपकरण, इन्जिनियरिङ, topografia
TopoCAD सर्वेक्षण, सीएडी रेखाचित्र, र ईन्जिनियरिंग डिजाइनको लागि आधारभूत अझै व्यापक समाधान हो; यद्यपि उसले विकासको क्रममा भन्दा बढि गर्छ तर स्वीडेनमा उनको जन्म पछि १ years बर्ष भन्दा बढी लाग्यो। अब यो १२ भाषाहरू र countries० देशहरूमा विश्वभरि फैलिएको छ, यद्यपि यसले उच्च बजार क्षेत्र हासिल गरेको छैन जस्तो देखिन्छ।
TopoCAD कम्पनीको प्रमुख उत्पाद हो Chaos Systems, जसमा RhinoCeros पनि छ, थ्रीडी मोडेलिंगका लागि प्रोग्राम, बलियो तर यसका बारे कुरा गर्ने धेरै छैन। पनि अवस्थित छ Chaos डेस्कटप, कागजात प्रबन्धक, प्रोजेक्टवाइजले गर्ने काम जस्तै। यद्यपि अधिक व्यावहारिक, माइक्रोसफ्ट आउटलुक र कागजातहरू र मेटाडेटा सहयोगी सुविधाहरूमा एकीकरणको साथ; TopoCAD उत्पादनहरूका लागि यसमा दर्शक हुन्छ, जबकि dgn, dxf र dwg जस्ता ढाँचा छविहरूको रूपमा हेर्न सकिन्छ।
Chaos समाधान को अवधारणा, TopoCAD मार्फत धेरै रोचक छ, किनभने यसको नाम छोटो हुन्छ; यसको अनुप्रयोग डेटा अधिग्रहण, सुधार र समायोजन, सीएडी रेखाचित्र, GIS को एकीकरण, ईन्जिनियरिङ् डिजाइन र चक्रोग्राफिक उपकरणमा डेटा पठाउन को लागी सम्भावना बन्द गर्दछ।
कुनै पनि अन्य जस्तै, लाइनसँग पाठक संस्करण छ, एक प्लस आयात गर्न र dwg / dxf ढाँचामा निर्यात गर्न वा सर्वेक्षण उपकरणहरूको अन्तर्क्रियामा समावेश गर्न सकिन्छ। बाँकी एक मोड्युलर दायरा हो, तिनीहरू टोपोग्राफी र डिजाईन बीचको प्याकेजमा गठन गर्न सकिन्छ वा तिनीहरू स्वतन्त्र रूपमा स्वाद लिन सकिन्छ कि मोडेलमा स्पष्ट रूपमा स्थापित भूमिकाका अनुसार:
क्षेत्रबाट डेस्कटपमा: टोपोग्राफी / सीएडी। TopoCAD बेस भनिने प्याकेजमा COGO सामिल छ, यसले सर्वेक्षण उपकरणहरूसँग जडान गर्न सक्दछ, यसले कम से कम वर्गको विधि प्रयोग गरेर ट्र्याभर्स समायोजन गर्न सक्दछ। यसले टेर्रेन मोडेलहरू (डीटीएम र टीआईएन) पनि सञ्चालन गर्दछ। तपाइँको नतिजाले केहि बुझाउँदछ जस्तै समोच्च रेखाहरू, प्रोफाइलहरू, भोल्युम गणना र क्रस सेक्सनहरू (डिजाईन होइन)। एक सीएडी उपकरणको रूपमा यसमा तपाईले माग्न सक्ने सबै कुरा छ, सटीक निर्माण आदेशहरूको साथ, सन्दर्भ कल गर्न सक्षम हुन वा सामान्य ढाँचाहरू जस्तै dwg, dxf, dgn, landXML र आकार फाइलहरू आयात गर्न। जहाँसम्म शीर्ष ढाँचाको रूपमा, यसले समान मानचित्र भित्र धेरै विशेषताहरू ह्यान्डल गर्न सक्दछ xfm of Bentley Map। साथै बेस मोड्युलले लेआउटहरू (पानाहरू) को पाठक र क्यास डेस्कटपको मेटाडेटाको डाटाबेसको विशेषता र पाठक समावेश गर्दछ।
डेस्कटपबाट डेटाबेसमा: GIS / नक्सामा। यस्तो हुन्छ कि शीर्ष ढाँचा विशेषताहरूको साथ साधारण सीएडी होइन, तर यसको एक्सएमएल स्कीमा जानकारी भण्डारण गर्दछ जुन अर्कजीआईएस एमएक्सडीमा पठाउन सकिन्छ, तालिकाहरू र विशेषताहरू रूपान्तरण गर्दा तिनीहरू टोपोकैडमा देखिने छन्। यसले डाटाबेससँग आर्कएसडिई मार्फत अन्तरक्रिया गर्न पनि सक्छ।
तपाईं यस्तो KML, Mapinfo वा स्थानिक डाटाबेस रूपमा साझा ढाँचाको निर्यात गर्न सक्नुहुन्छ। हालै FDO कनेक्टर यस्तो MySQL, PostGIS, Oracle, एमएस SQL ​​सर्भर स्थानिक, SQLite, ESRI ArcSDE, sdf (Autodesk MapGuide), ESRI SHP, ODBC, WFS, WMS, GDAL खुला रूपमा स्तर मा डाटा अन्तरक्रिया गर्न (जियोस्पाटियल डाटा शुरू Abstraction पुस्तकालय) (रास्टर), OGR (भेक्टर ढाँचा: SHP, gml, DGN, KML, Mapinfo आदि)।
मेज प्लटरबाट प्लान्ट / नक्साबाट। यसमा लेआउटहरू सिर्जना गर्ने क्षमताको क्षमता छ जुन पानाहरू, विशेषताहरूबाट निकालेको डाटाको साथ। भेक्टर वस्तुहरू, दुबै लाइनहरू र तथ्या .्क, गतिशील तत्वहरू, जसको साथ लेआउटबाट अपरेशनहरू गर्न सकिन्छ, उदाहरणका लागि, मोडेलमा टेक्स्ट साइज धेरै फेरबदल बिना लेआउटबाट समायोजित गर्न सकिन्छ। स्केच-प्रकारको काम समर्थन गर्दछ, यदि अन्तिम उत्पादमा कलात्मक स्वाद जारी गर्न को लागी।
डेस्कबाट डिजाइन: ईन्जिनियरिङ्. यसमा ज्यामितीय रोड डिजाइनको लागि क्षमताहरू, सिभिल थ्रीडी वा कुनै प्रतिस्पर्धाको रूपमा समावेश गर्दछ। यससँग रेलवे, सुरुnelहरू, पाइपहरू, नहरहरू र लीभीहरूको डिजाइनको लागि पनि केही छ।
डेटा संभाला भएको तरिका, उदाहरणका लागि क्रस सेक्सनहरू सामान्य भन्दा बढी गतिशील छ, त्यहाँ संयन्त्रमा पङ्क्तिबद्ध र उत्पन्न प्रोफाईलसँग दुवै अन्तरक्रिया छ।
डिजाइन देखि फील्ड: टोपोग्राफी / Stakeout। एक डिजाइन को डेटा फाईलमा निर्यात गर्न सकिन्छ कि कुल स्टेशन वा GPS संचालन गर्न प्रयोग गर्न सक्दछ। यसले फरक पार्दैन कि डाटा आयातको बखत UTM मा रूपान्तरण भयो, यो प्रक्षेपण सेटिंग्सको कारण हुने क्षतिबाट बच्न समतल समन्वयको रूपमा निर्यात गर्न सकिन्छ। र त्यसपछि यो चक्र बारम्बार दोहोर्याउन सकिन्छ।
समग्रमा, म यो एक चाखलाग्दो उपकरण लाग्छ। एक क्याड टोपोग्राफी क्षमताहरूसँग म्यापि,, डिजाइन र अन्तर्क्रियाको साथ। आधार मूल्य लगभग $ १1,500०० मा शुरू हुन्छ, केमा आधारित छ।
यहाँ तपाईं डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ TopoCAD को एक परीक्षण संस्करण
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो रोबोट यहाँ बस्नका लागि छन्
अर्को पोस्ट 60 तुलना तालिका कुल स्टेशनअर्को »
१० जवाफहरू "TopoCAD, टोपो भन्दा बढी, CAD भन्दा बढी"
हो, यो एक राम्रो कार्यक्रम हो।
अफसोस कि अमेरिकामा कुनै वितरक छैन। युरोप र मध्य पूर्वमा यो छ जहाँ यो राम्रो संग स्थित छ, यसको वितरक पृष्ठ को अनुसार।
जोस कार्लोस भन्छिन्:
ईन्जिनियरिंगमा यसको अनुप्रयोगको लागि यो धेरै चाखलाग्दो छ, म यो कार्यक्रमको बारेमा जान्न चाहन्छु तर पेरूमा तिनीहरू यस सफ्टवेयरको बारेमा डिक्टेन्ट गर्दैनन् किनकि म यस बारेमा थप जानकारी लिन सक्दछु।
राफेल सिएरा भन्छिन्:
म Geogafo हुँ, म सिकाउँछु, मैले 1981 लाई स्नातक गरे र मेरो अध्ययनको समयमा, आज कुनै यस्तो उपयोगी कार्यक्रमहरू थिएनन्।
म यस कार्यक्रममा पहुँच गर्न चाहन्छु, यसको सबै अनुप्रयोगहरू बिना बिना प्रतिबन्धहरू, यसको फाइदाहरू, अनुप्रयोगहरू, आदि सिक्न, र अन्य समान प्रोग्रामहरूसँग तुलना गर्न सक्षम हुन। त्यसकारण, पाठ्यक्रमका सदस्यहरूलाई यी उपकरणहरूको एक एकीकृत दृष्टि दिनुहोस्, एक राम्रो शिक्षण र अकादमिक समयको राम्रो प्रयोगमा योगदान।
अग्रिम धन्यवाद र सहयोगको लागि जुन तपाई यो सञ्चारमा आशा गर्न सक्नुहुन्छ।
मैले प्रयोग गरिरहेको संस्करण Topocad 7.2.1 हो
यो एक राम्रो कार्यक्रम हो जुन मैले प्रयोग गरेको छु, यसको धेरै फाईलहरू छन्
यदि कसैले मलाई चेतावनी सुनाउन चाहन्छ भने म जागिर हुनेछु
एक भन्दा बढि जान्नु राम्रो ...
सबै पनि अनुहार छन्
मलाई लाग्छ कि पोर्चुगलमा कुनै प्रतिनिधि छैन, तर यस पृष्ठमा तपाईंले अन्य युरोपेली देशहरू हेर्न सक्नुहुनेछ, यदि यो उपयोगी छ भने तपाईंले तिनीहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ
ओला म यो सफ्टवेयर किन्न सक्छु म यसलाई पोर्चुगलमा किन खरीद गर्न चाहन्छु?
तपाईं यस ईमेलमा TopoCAD बारे सिक्न सक्नुहुन्छ
leonardo camilo serrano भन्छिन्:
शुभ प्रभात, म Civilcad मा विश्वसनीयता र लिङ्ग आकृति लागि ईगल बिन्दु शेयर मात्रा काम, मात्रा, पार वर्गहरु, सडक र QUARRIES को डिजाइन उत्पन्न सक्षम, सर्वेक्षण र सिविल ईन्जिनियरिङ् काम गर्न सफ्टवेयर खरिद धेरै इच्छुक छु यसको गति लागि, धेरै सफ्टवेयर संग काम गरिरहेको छ जागिर विकास गर्न, तर म चाहन्छु मलाई मेरो काम आत्मविश्वास र चपलता दिन्छ कि एक साथ काम गर्न, म तपाईंको ध्यान लागि खरिद मूल्य र धन्यवाद रूपमा जान्न चाहन्छु